बुद्धको त्यो सहर- कोपिला - कान्तिपुर समाचार
बुद्धको त्यो सहर
वैशाख २२, २०७६ मनोज पौडेल
गौतम बुद्धले जहाँ बाल्यकाल र यौवनका दिनहरू बिताए, त्यो ठाउँ हो– तिलौराकोट  । बुद्ध जन्मिएका बेला २५ सय वर्षअघि कस्तो थियो होला त्यो सहर ? कस्ता घर थिए होलान् ? कस्तो जीवनशैली थियो होला ? यस्तो कुरा अनुसन्धान नगरी र त्यसका प्रमाण नभेटी थाहा हुन्न  ।
विभिन्न देशका विज्ञहरूसहित गरिएको उत्खनन् र अनुसन्धानले त्यति बेलाको बुद्धको सहर फेला परेको छ । केही दिनअघि मात्र सकिएको दुई महिनासम्मको उत्खनन्मा धेरै नयाँ कुरा भेटिएका छन् । कस्तो रहेछ त बुद्धको त्यो सहर ? जान्नका लागि यो पल्ट उत्खननस्थल तिलौराकोटतर्फ लागौं ।
शाक्य वंशीय राजधानी रहेको प्राचीन कपिलवस्तु (तिलौराकोट) मा ऐतिहासिक रूपाकृतिको सहर भेटिएको हो । चिनियाँ यात्रीद्वय पाँचौं शताब्दीमा आएका फायहान र सातौं शताब्दीमा आएका हृवेगंसाङले आफ्नो यात्रा विवरणमा उल्लेख गरेका तथ्यहरू भेटिँदै गएका छन् । बेलायतको डुर्‍हाम युनिभर्सिटी, पुरातत्त्व विभाग र लुम्बिनी विकास कोषका विज्ञ संलग्न टोलीले गरेको उत्खनन्, अध्ययन र अन्वेषणले नयाँ तथ्यहरू फेला परेका हुन् ।
उत्खनन्का क्रममा व्यवस्थित सहर र घर पाइएका छन् । त्यस्तै तिलौराकोटभित्र बुद्धकाल आसपासका बाटो, नाली, सुरक्षा किल्ला पर्खाल र मानवबस्ती फेला परेका छन् । ठाउँठाउँमा ठुल्ठूला भवनका संरचना, इनार र पोखरी पनि भेटिएका छन् । दुवै चिनियाँ यात्रीले आफ्नो यात्रा विवरणमा उल्लेख गरेका धेरै कुरा पाइएको तिलौराकोट अध्ययन उत्खनन् परियोजना सहनिर्देशक वरिष्ठ पुरातत्त्वविद् कोषप्रसाद आचार्यले बताए ।
यसपटक तिलौराकोटका ४ ठाउँमा उत्खनन् गरियो । मध्यक्षेत्रमा पाइएको सय बाई सय मिटर लम्बाइ–चौडाइको मध्यभागको प्रशासनिक भवन संरचनाको पश्चिमी सुरक्षा किल्ला पर्खालको उत्खनन् गरियो । त्यहाँ यस पटक १५ मिटर लम्बाइसम्म सुरक्षा पर्खाल भेट्टाइयो । त्यो ५० मिटरसम्म जाने अनुमान गरिएको छ । त्यहाँ ४ वर्षअघि जियोफिजिक्स (भूभौतिक सर्भे) गर्दा ठूलो संरचना पाइएको थियो । पछिल्लापटक भइरहेका उत्खनन्को मध्यभागको प्रशासनिक भवन संरचना मुख्य उपलब्धि हो । मुख्य प्रशासनिक भवन ईसापूर्व तेस्रो शताब्दीतिरको हो । पश्चिमी सुरक्षा किल्ला पर्खाल नजिक उत्खनन् गर्दा तामाको कुषाणकालीन २ सय ५२ सिक्का यस वर्ष भटिएको छ । यो सिक्का ईसाको दोस्रो शताब्दीतिर प्रयोग गरिन्थ्यो ।
त्यस्तै, अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि सन् २०१५ मा मध्यभागमा ३० बाई ३० मिटर लम्बाइ–चौडाइको पोखरी फेला परेको थियो । त्यो पोखरीको यस वर्ष अध्यनन गर्दा दुई किनारको छेउ (कर्नर) भेटिए । पूर्वपश्चिमतिरको उत्खनन्मा दक्षिण–पश्चिम पोखरीको कर्नर भेटियो । र, अर्कोतिर दक्षिण पूर्वतिरको कर्नर भेटियो । यो पोखरी २३ सय वर्ष पुरानो रहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसले के देखाउँछ भने तिलौराकोट दरबारमा बस्ने राजा महाराजा पोखरी प्रयोग गर्थे । त्यही भएर यसलाई ‘रोयल ट्यांक’ भन्न सकिन्छ । यो अहिले पनि पोखरीकै रूपमा देखिन्छ । जमिनको २ मिटर तल २६ तहसम्म रहेको इँटाको मनमोहक पर्खाल देखिन्छ ।
त्यस्तै, समयमाई मन्दिरदेखि उत्तर–पश्चिममा २ वर्षदेखि गरिएको उत्खनन् स्थलमा यस वर्ष पश्चिमतिर बढाएर उत्खनन् गरियो । नयाँ संरचना पाइयो । त्यस्तै यसपटक नयाँ ठाउँ तिलौराकोट कम्पाउन्ड बाहिर रहेको कन्थक स्तूपमा पनि उत्खनन् गरियो । यो ठाउँमा बेलायती कर्मचारी वाडेलले सन् १८९८ मा खनेका थिए । त्यसपछि पहिलोपटक यस वर्ष उत्खनन् भयो । इँटाभन्दा पहिले प्रयोग गरिने माटोको स्तूपहरू फेला परेका छन् । संरचनाहरू भेटिएका छन् । भेटिएको तथ्यहरूको अनुसन्धान भइरहेको छ । अर्को वर्ष विस्तृत खोज गरिने बताइएको छ । राजकुमार सिद्धार्थ ज्ञान प्राप्त गर्न दरबार छाडेर जाँदा सँगै लिएर गएको घोडा आधा बाटोबाट फर्काइएपछि दरबार आउँदै गर्दा तिलौराकोट नजिकै घोडा कन्थक मरेको थियो । त्यसैको सम्झनामा उक्त ठाउँमा कन्थक स्तूप राखिएको छ ।
यस वर्ष उत्खनन्मा माटोको मूर्ति, कुँदिएको इँटा, मानव मूर्ति र जनावरका मूर्ति फेला परेका छन् । कुमालेको माटोको भुङ्ग्रो, जाँतो आकारको टुक्रा र धातु पगाल्ने भाँडाकँॅडा पनि पाइएका छन् । दुई महिना भएको उत्खनन् केही दिनअघि मात्र सकिएको छ । यसपटक यहाँ अनुसन्धानका क्रममा भौतिक सर्भे, ड्रोन फोटोग्राफी, टोपोग्राफी, फिल्ड वाकिङ, सोसियो इकोनोमी र भिजिटर सर्भे गरी अनुन्सन्धान गरिएको थियो । बेलायती प्रयोगशालामा माटो, कार्बन डेटिङ परीक्षण गर्दा प्राचीनतम भएको विवरण आएको हो । भगवान् बुद्धको जन्म साढे २५ सय वर्षअघि भएको इतिहासमा उल्लेख छ । तर त्यसअघि नै भगवान् गौतम बुद्धको बाल्यकाल र युवा अवस्था बितेको तिलौराकोटमा गाउँको स्वरूपमा मानवीय चहलपहल बढेर बस्ती बसेको पुष्टि भएको पुरातत्त्वविद् बताउँछन् । यहाँ ईसापूर्व आठौं शताब्दी (२८ सय वर्ष) अघि नै मानव बसोबास भएको पाइएको छ । त्यसको २ सय वर्षपछि ईसापूर्व छैटौं शताब्दीमा सहरीकरण भएको प्रमाण भेटिएको छ । त्यति बेला घर बनाउन इँटाको प्रचल थिएन । खरको छानो, माटोको घरका भित्ता र काठबाँसको खाँबो गाडेर घर बनाउने प्रचलन थियो । जुन यहाँ ठाउँठाउँमा त्यत्तिखेरको माटो र काठबाँसको प्वाल (पोस्ट होल) फेला परिसकेको छ । २०१५ मा वैज्ञानिक कालक्रम निर्धारण गर्न संकलन गरिएको नमुनाले ईसापूर्व आठौं शताब्दीदेखि नै यहाँ मानव रहनसहन र बसोबास भएको प्रमाणित भएको छ । तिलौराकोट उत्खनन्को हालसम्मको अन्वेषण र वैज्ञानिक परीक्षणले तिलौराकोट व्यवस्थित किल्लाबन्दीको सहर भएको डुर्‍हाम विश्वविद्यालय बेलायतका प्राध्यापक तथा प्रमुख पुरातत्त्वविद् डा. रविन कनिङघमले बताए ।
‘उत्खनन्ले ऐतिहासिक सहरबारे महत्त्वपूर्ण प्रमाण फेला परे,’ लुम्बिनी विकास कोष उपाध्यक्ष भिक्षु मैत्तेय शाक्यपुत्रले भने, ‘त्यसैका आधारमा छिट्टै तिलौराकोट विश्व सम्पदामा सूचीकृत हुन्छ ।’ त्यसैले कोषले अहिलेदेखि तिलौराकोटमा विकासका काम थालेको छ । ‘तिलौराकोटलाई सफा गरी चिरिच्याट्ट बनाएर पर्यटकीय आकर्षण थप्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘एक वर्षभित्रै रूप परिवर्तन हुन्छ ।’ सन् २०१३ देखि यहाँ उत्खनन् अन्वेषण भइरहेको छ । पहिलो वर्ष लुम्बिनी विकास कोष र त्यसपछि जापान सरकारको जापनिज फन्ड इन ट्रस्ट (जेफिड) को सहयोगमा युनेस्कोमार्फत अध्ययन अन्वेषण भइरहेको हो । सन् २०१९ देखि २०२१ सम्म तेस्रो चरणका लागि पनि सम्झौता भई काम थालिएको हो । तेस्रो चरणमा विश्व सम्पदाका लागि प्रमाण संकलन गरी डकुमेन्टेसन गरिने काम अघि बढाइएको छ ।
उत्खनन्मा बेलायतको डुर्‍हाम विश्वविद्यालय र लार्टोब विश्वविद्यालय अस्ट्रेलियाका प्रोफेसर र प्राध्यापक १० सहभागी थिए । युनेस्को कन्सल्ट्यान्ट, पुरातत्त्व विभागका र लुम्बिनी विकास कोषका २० विशेषज्ञ तथा पुरातत्त्वविद् सहभागी छन् । केही दिन बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानका पुरातत्त्वविद् पनि सहभागी थिए । त्यस्तै त्रिविविका इतिहास र संस्कृति पढ्ने १२ विद्यार्थी पनि सहभागी थिए । तिलौराकोट राजा शुद्धोदनको राजप्रासाद तथा भगवान् गौतम बुद्धले २९ वर्षको युवा अवस्था बिताएको स्थल भएको बौद्ध धर्मावलम्बी निक्कै महत्त्वपुर्ण मान्छन् । तिलौराकोट सन् १९९६ मा विश्व सम्पदाको प्रारम्भिक सूचीमा परेको थियो ।
प्रकाशित : वैशाख २२, २०७६ १२:१३
वैशाख १५, २०७६ कान्तिपुर संवाददाता
रमिला र प्रमिला जुम्ल्याह दिदीबहिनी हुन्  । दुवै कक्षा दुईमा पढ्छन्  ।
अनुहार मात्र होइन, दुवैजनाको चञ्चले स्वभाव पनि उस्तै छ । लुगा उस्तै नभए झगडा गर्छन् । उनीहरूको आमाबाबाको फलफूलको बगैँचा छ । बगैँचामा आरु, आँप, सुन्तला, कागती, आलुपखडा, नासपाती, आल्चा, खुर्पानी र हलुवावेदका बोट प्रशस्तै छन् । फलफूल पाकेको समयमा बगैँचाबाट निकै मीठो वासना आउँछ । आमाबाबाले फलफूल बजारमा बेच्न लैजाँदा कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई पनि सँगै लैजानुहुन्छ । उहाँहरूले बगैँचामा सँधै राम्रो रेखदेख पनि गर्नुहुन्छ ।
फागुन महिनादेखि ती फलफूलका बोटमा नयाँ स–साना पात पलाउन थालेका थिए । चैत महिनामा सबै फलफूलका बोटमा फूल फुलेर बगैँचा नै पूरै फूलले ढाकेको थियो । रमिला र प्रमिला दुवैलाई फूल असाध्यै मन पर्छ । उनीहरूलाई फूलहरूले ढाकेको बगैँचा देख्दा निकै रमाइलो लागेको थियो । कहिलेकाहीँ बतासले बगैँचाबाट फूलहरू उडाएर आँगनमा ल्याउँदा कसको फूल कति भन्दै दुवैले टिपेर जम्मा गर्थे ।
एक दिन आमाबाबाको आँखा छलेर उनीहरू सुटुक्क बगैँचामा पसे ।
‘अहो कति धेरै फूलहरू झरेका पो रहेछन् है दिदी १’ प्रमिलाले भनिन् ।
‘भुँइमा मात्र हो र त्यो आरुको बोटहरूमा कति धेरै फूल रहेछ हेर त बहिनी । यसलाई पनि झारेर धेरै फूल बनाउनुपर्छ बुझ्यौ ?’
रमिलाले अलि परबाट एउटा लामो लौरो ल्याएर आरुको बोटमा हिर्काउन थालिन् ।
आरुका फूल झरेर उनीहरूका जीउभरि पर्दा जताततै फूलहरू टाँसियो । आफ्नो जीउमा टाँसिएका फूल हेर्दै खुसी भएर दुवैले एकैसाथ भने, ‘हामीहरू त फूलका छोरी पो भएछौँ लौ आज ?’
फूलसँग खेल्न पाएर मख्ख परेका उनीहरूले भुँइको फूल हातले सोरेर कपालमा राखे । जीउमा जताततै टाँसिएको फूलहरू आमाबाबालाई देखाउन हतारिँदै घरभित्र पसे । फूलसँग खेल्न पाएकाले खुसी भएका उनीहरूले आमाबाबालाई थाहा नदिई सुटुक्क बगैँचामा गएको कुरा भुसुक्कै बिर्सिएछन् । फूलभन्दा पनि चम्किलो अनुहार पारेर फूलहरू टाँसिएको आफ्नो जीउ देखाउँदै उनीहरूले आमाबाबालाई भने, ‘हेर्नुस् त आज हामी कति राम्रा देखिएका छौँ । हामीले बगैँचामा गएर आरुका फूल पनि झार्‍यौँ अनि कपालमा पनि राख्यौँ नि । हामीहरू त फूलका छोरी पो भयौँ आज त १’
फूलसँग रमाएका छोरीहरूलाई देख्दा आमाबाबा खुसी भए पनि उनीहरूले बिनाकाम फूल झारेको उहाँहरूलाई मन परेको थिएन । छोरीहरूले नबुझेर यस्तो काम गरेका हुन् भन्ने थाहा थियो । त्यसैले गाली गरेरभन्दा पनि आमाले गाला मुसार्दै भन्नुभयो, ‘प्यारा छोरीहरू, आज फूल लगाएर मात्र होइन, अरू बेलामा पनि सँधै फूलजस्तै राम्रा छौ हाम्रा लागि ।’
‘अबदेखि प्यारा छोरीले बगैँचामा गएर जथाभावी फलफूलका फूल झार्न हुँदैन है,’ बाबाले नम्र स्वरमा भन्नुभयो ।
बाबाको कुराले फूलसँग रमाएका उनीहरूको अनुहार अँध्यारो भयो ।
‘हामीलाई त फूलसँग खेल्न कस्तो रमाइलो भएको थियो । किन र बाबा आरुका फूल झार्दा के हुन्छ र ?’ उनीहरूले दुःखित हुँदै सोधे ।
छोरीहरूको अनुहारमा निराशा देखेर बाबाले सम्झाउँदै भन्नुभयो, ‘प्यारा छोरीहरू, यतिखेर विशेषतः चैत, वैशाखमा रूखमा नयाँ पालुवा पलाउँछन् । फूल फूलेका हुन्छन् । फलहरू पनि लागेका हुन्छन् । यसले वसन्तऋतु आएको संकेत गर्छ । फलफूलका बोटमा हिर्काएर फूलहरू झार्दा तिनीहरूका स–साना हाँगा भाँचिन सक्छन् । फूल झरेपछि फल पनि लाग्दैनन् । त्यसैले फलफूलका बोटमा हिर्काएर फूल झार्नुहुँदैन बुझ्यौ ?’
बाबाले भन्नुभएपछि मात्र उनीहरूले फूल झार्न नहुने कारण बुझे । अघि रमाइलोका लागि फूल झारेर आफूहरूले गलत गरेका रहेछौ भन्ने महसुस दुवैले गरे । दुवैले आमाबाबालाई हेर्दै भने, ‘अबदेखि हामी बगैँचामा गएर भुँइमा झरेको फूल मात्र टिपेर खेल्छौ है ।’
त्यस दिनदेखि उनीहरूले बगैँचामा झरेका फूल मात्र टिपेर खेल्न थाले । बगैँचामा जान नभ्याएका दिन झ्यालबाट बगैँचाका फूल हेर्दै खुसी हुन थाले ।
- देवकी केसी
प्रकाशित : वैशाख १५, २०७६ ११:५०